Telefishinka Horyaal iyo Raadiyo Kulmiye Kala Ayaan Wacan !!! | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Telefishinka Horyaal iyo Raadiyo Kulmiye Kala Ayaan Wacan !!!
Telefishinka Horyaal iyo Raadiyo Kulmiye Kala Ayaan Wacan !!!
Ciidamada Ammaanka Somaliland ayaa la wareegay xarunta dhexe ee Telefishinka Horyaal ee magaaladda Hargeysa. Islamarkaasna waxaa shaqaalaha Telefishinka Horyaal laga huleeliyay goobta, ayagoo aan qaadan wax agab ah, (September 06, 2019).
Haddaba, Telefishinka Horyaal maxuu galabsaday? Xuriyadda hadalka sidee bay uga dhaqan gashay dalka Soomaaliya? Maxaase khaladaadka jira lagu sixi karaa? Waa doodda maqaalka.
Xuriyadda hadalka iyo garsoor madax-banaan waa tiirarka ugu muhiimsan dimoqraadiyadda ee uu muwaaddinka ku ilaashan karo xuquuqdiisa, misna lagula dagaalami karo musuqmaasuqa iyo cadaalad darrada. Islamarkaasna lagu ciqaabi karo shaqsiyaadka magaca dowladda ku dheef raadsada, ayagoo tacadiyo u gaysanaya muwaadiniinta.
In badan ayaynu maqalnay eedo ay isu jeedinayaan warbaahinta iyo maamuladda dalka ka jira. Dhanka kalana saxafiyiintu waxay la kulmaan xarig iyo dilba. Halka tiro wariyeyaal ahna ay dalka iskaga cararayn, ka dib markii loogu hanjabay dil.
Khibrad yari iyo warar ku-turi-ku-teen [been] ah, oo la tabiyaa ayaa si weyn u dhaawacday sharaftii ay mudnaayeen suxufiyiinta Soomaaliyeed. Waxaa intaas dheer, in warbaahinta qaarkeed ay ku adeegtaan shaqsiyaad iyo kooxo dano qarsoon leh.
Balse, barnaamijka Hage oo cajalad [clip] daqiiqado yar soconaysa, hordhacna u ahayd warbixin dheer uu Telefishinka Horyaal ku bidhaaminayey dhibaatada uu bulshadda u gaysto maandooriyaha Jaadka. Si gaar ah, barnaamijka Hage waxuu diiradda u saarayey kuna gorfeenayey hablaha qayila. Tani ayaa sabab looga dhigay in albaabada la iskugu dhufto Telefishinka Horyaal!
Wariyaha diyaariyey warbixinta waxaa uu qariyay wajiyada, hablaha qayilayey, halka codadkooda runta ahna uu maldahay. Halkaas waxaa ka cad in wariyaha barnaamijka Hage adeegsaday xirfad heer sare ah, taasoo waafaqsan anshaxa saxaafadda si loo dhowro xuquuqda shaqsiga.
Maamulka Somaliland, waxay aheed inay xogta ku jirta warbixinta darsaan, dabadeedna degsadaan qorshe looga badbaadinayo waxyeelada bulshada u gaysanayo maandooriyaha Jaadka. “Tallaabada ay ku ciqaabayso maamulka Somaliland Telefishinka Horyaal waa mid u danaynaysa waddamada maandooriyaha Jaadka u soo dhoofiya Somaliland,” sidaas waxaa rumaysan Cigaal Yare oo falanqeeya siyaasadda gobolka.
Dhanka kale, Raadiyo Kulmiye ayaa tabiyay warbixin muujinaysa musuqmaasuq baahsan oo ka jira Xarunta Hay’adda Dembi Baarista Booliiska Soomaaliyeed ee loo yaqaan “CID,” (September 04, 2019).
Weriye ka tirsan Raadiyo Kulmiye, ayay u suurto gashay inuu gudaha u galo xarunta CID. Waxaa uu soo bandhigay cadeemo muujinaya in lacago howl-fududeyn ah laga qaado muwaadiniinta adeega u soo doonta Xarunta Dembi Baarista ee CID, taasoo dhawac ku ah: (1) Ammaanka qaranka, iyo (2) Jeebka muwadinka.
Baahinta warbixinta Raadiyo Kulmiye, waxay horseeday in tallaabo uu qaado Taliska Booliiska Soomaaliya. Janan Zakiya Xussen ayaa sheegtay in muddo saddex maalmood ah la hakiyay bixinta warqadda caddeynaya muwaadiniinta aan dambiyada gelin, ujeddada ayaa lagu sheegay in dib u habeyn lagu wado habka bixinta warqada dembi la’aanta, (September 07, 2019).
Jawaabta deg-degta ah ay bixisay Janan Zakiya Xussen waxay muujinaysaa sida Taliska Booliiska Soomaaliya uga go’an tahay cirib tirka musuqmaasuqa ka dhex jira Booliiska. “Danta qaranka iyo tan muwaaddiniinta waxay ku jirtaa, in Booliiska Soomaaliya ka hufnaado musuqmaasuq, eex iyo caddaalad darro,” sidaas waxaa raaciyay Cigaal Yare.
Dunidda maanta waxay horumar ka samaysay cilmiga teknoolajiyada, sida aaladaha duuba cod iyo muuqaal, kuwaas oo si fudud iyo qiimo jaban lagu heli karo. Si loo cirib tiro musuqmaasuqa waa in dowladda ku rakibto qalabka duuba muuqaalka iyo codka xafiisyada bixiya adeega bulshada.
Islamarkaasna shacabka Soomaaliyeed iyo saxaafadda waa in lagu dhiirigeliyo la dagaalanka musuqmaasuqa, ayadoo aan lagu xadgudbeen shaqaalaha dowladda, iyo sharafta qaranka, ujeeddaduna tahay in muwaaddiniinteenu helaan adeeg nadiif ah, dalkana sumcadiisa kor looga qaado halka uu maanta taagan yahay. Inkastoo, Telefishanka Horyaal iyo Raadiyo Kulmiye ay guteen waajibaadkoodii shaqadda saxaafadda iyo wadaninnimo, haddana kala ayaan wacan.
Previous articleSawirro:MD Waare oo kulan muhiimad weyn leh la yeeshay Odayaasha dhaqanka Hiiraan
Next articleUhuru Kenyatta oo shuruud adag ku xiray inay Ciidamada Kenya ka baxaan Soomaaliya
AKHRISO: Qodobadda kaso baxay Shirkii Midowga Baarlamaannada Adduunka oo lagu soo geba gebeeyey Qatar+ sawirro
Sawirro:Alshabaab oo shaacisay Gaadiidkii ay ku qabsatay & Askartii ay ku dishay Weerarkii Saldhigga CeelSaniini
XOG: Kheyre, Muudeey & Mahad Cawad oo Kulan Albaabada u xiran yihiin ka yeeshay Isku Shaandheynta Wasiirada
Xog: Madaxweyne Farmaajo oo wada-hadalladii Kenyatta ku daray shuruud la xiriirta Axmed Madoobe
Akhriiso” Dowladda oo amar deg deg ah ka soo saartay khilaafka Egn Yariisow iyo Xafiiska Hanti Dhowrka Qaranka
Madaxweynaha Puntland oo Magacaabay Taliya Yaal Cusub “Hoos Ka-aqriso”